Ogaden News Agency (ONA) – Shirar lagu kala qabtay xeryaha Dhagaxley iyo Ifo
Shirar lagu kala qabtay xeryaha Dhagaxley iyo Ifo
Posted by ONA Admin	/ October 2, 2012
Taariikhdu markay ahayd 30/09/2012 ayaa lagu qabtay xerada qoxootiga ee Dhagaxlay kulan balaadhan oo ay siwada jir ah usoo agaasimeen maamulka faraca Midnimo ee ka howlgala Dhagaxlay iyo ururka OYSU fariciisa Dhagaxlay.
Shirkan oo ahaa shir aad u xiiso badnaa isla markaana lagusoo bandhigay ama lagaga hadlay arimo muhiim ah ayaa ka koobnaa 2 qaybood oo qaybtiisa hore ay ahayd shirkii caadiga ahaa ee faraca Midnimo kaasoo lagaga hadlay howlihii faraca ee caadiga ahaa.
Shirka ayaa furmay 2:00 duhurnimo waxaana sidii caadada ahayd lagu furay aayadaha quraanka kariimka ah shirka oo uu daadihinayay gudoomiyaha faraca halgame sugule ayaa markuu dhamaaday ajandihii shirkii caadiga ahaa ee faraca waxaa caynaanka shirka iyo hagistiisaba lagu wareejiyay xoghayaha OYSU faraca dhagaxlay halgame c/naasir xoghayaha iyo gudida lashaqaysa ee bulshada ree Ogadenia.
Sida aan lawada socono urur waynaha OYSU oo leh qorshe hawleed (Action plan) bil walba qabto shaqo, ayuu ururka OYSU faraciisa Dhagaxlay uu maanta xusay maalinta dhalinta Ogadenia oo loo cayimay 29ka SEP.
Ururka OYSU ayaa munaasabada ka soo jeediyay khudbado lagaga hadlayey 29ka Sep. iyo muhiimada ay u leedahay dhalinta Ogadenia ee Dhagaxlay iyo guud ahaan waxyaabaha looga baahan yahay dhalinta reer Ogadenia meel ay joogaanba ee quseeya dalkoodii iyo dadkoodii ka hadhay dunida ee gumaysigu daashaday.
Sidoo kale waxaa shirka lagaga hadlay akhlaaqda wanaagsan iyo in aan laga baydhin diinteenii iyo dhaqankeenii suubanaa maadaama oo aan nahay dad qoxooti ku ah wadan kale dhaqamo badan oo kala duwana daris lanoqday.
Ugu dambayntii waxaa dhalintii loo furay dood cilmiyeed ku saabsan halganka Ogadenia taasoo ay dadwaynuhuna si fiican uga qayb galeen doodii qof kastana uu cabiray aragtidiisa ku aadan dooda la soo bandhigay. Dooda qodobo badan ayaa lagu soo qaatay oo xiisa badan lahayd waxaana la isku waydaarsaday figrado dhaxal gal ah oo muhiim u ah dhalinta reer Ogadenia.
Sidoo kale ururka OYSU fariciisa Dhagaxlay ayaa maanta madasha shirka ku qaybiyay shahaadooyin lasiiyay dhalin ka qalin jabisay koorsada ALIFLE oo ay indhawaalaba bixinayeen mas’uuliyiinta OYSU Dhagaxlay waxaana maanta shahaadooyin la siiyay dhalinyaro badan oo kaqalin jabiyay koorso halgameedka Alifle oo iyadu sigaar ah mihiimad ugu leh guud ahaan dadka reer Ogadenia gaar ahaan dhalinta halganka. wada
Waxaa markale lagu wareejiyay shirkii iyo hagistiisii gudoomiyaha faraca MIDNIMO oo dardaaran dheer kadib si qiimabadan u soo xidhay shirkii xili ay goorsheegtu ahayd 4:00pm galabnimo
Waxaa sidoo kale lagu qabtay shirkii faraca Muftaaxul-Xoriya e xerada Ifo shir si fiican loo soo agaasimay , shirkaasoo furmay 8duhurinimo oo la soo gaba-gabeeyay 11galabnimo
Waxaa shirka ka soo qaybgaley intabadan xubnaha faraca, waxaana lagu furay wacdi diini ah oo uu soo jeediyay SH. Ahmed. Waxa kaloo warbixin dhanwalba ah ka soo jeediyay Farxan Maxamed. Dood iyo fikrada isweydaarsi ka dib, waxuu shirkii Ifo ku soo gabagagboobay farxad iyo jawi dagan iyadoo dhaman xubnahii ka soo qayb galay shirka ay balanqaden inay sii laba jibarayan howlaha halganka, waxayna madash shirka ka bixiyen dhaqaalo fiican oo ay u huren halganka socda.
Ugu danbayn wuxu shirku halbanyo u diray N/hurayaasha CWXO, wuxuuna canbaareyay xasuqa kasocda Ogadenia ee gumaysiga Itobiya uu ka wada halkaa.
Guuleed gundiid iyo Farxaan